७ महिना पछी ओली किन बालुवाटार पुगे? यस्तो रहेछ भित्रि रहस्य !
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७ महिना पछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तोमा ओली बालुवाटार पुगेका हुन् ।
ओलीसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि देउवाले बोलाएका थिए । ७ महिना पनि तीन नेता एकै ठाउँमा भेला भएर लामो छलफल गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असार २९ गते लावालस्करसहित बालुवाटार छोडेका ओली त्यसयता फर्किएका थिएनन्। ओलीलाई देउवाले बालुवाटारमा निम्तो नदिएका भने होइनन्। यो बीच दुई पटक देउवाले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।
ती दुबै बैठक सबै दलका प्रमुखहरूलाई बोलाइएको भए पनि एमाले अध्यक्ष ओली आफू पनि गएनन् न त पार्टीको तर्फबाट कोही प्रतिनिधि पठाए।
एमाले संसदमा निरन्तर अवरोध गरिरहने र सर्वदलीय बैठकको छलफलमा पनि सहभागी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग एक्लै कुराकानी गरेका थिए। पुस २४ गते देउवा आफैं ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।
देउवा बालकोट पुगेको ७ महिनापछि ओली आज बालुवाटार आउन राजी भएका हुन्। समसामियक विषयमा छलफल गर्न भनेर देउवाले ओली र प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका हुन्।
प्रचण्ड र ओलीलाई बालुवाटार बोलाए पनि देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने बोलाएका थिएनन् ।
नेपाल नआउने भएपछि ओली बालुवाटार जान तयार रहेको श्रोतको दावि छ । नेपाल सहभागी बैठकमा ओली नआउने भएकैले देउवाले यस्तो गरेका हुन्।
‘अध्यक्षज्युलाई समसामयिक विषयमा तीन नेताबीच छलफल गर्ने भनेर खबर गरिएको छ। अरूलाई किन नबोलाइएको भनेर हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ एमालेका एक नेताले भने,‘माधव नेपालको पार्टीलाई हामीले मान्यता दिएको छैन। नेपाल समूहलाई हेर्ने हाम्रो घोषित नीति सार्वजनिक नै छ नि !’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगनन्नाथ खतिवडाले माधव नेपाललाई नबोलाइनुलाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको बताए। विसर्जनवादीको मुख एकीकृत समाजवादीले नहेर्ने अनि विद्रोहीको मुख एमालेले नहेर्ने भएकाले यस्तो गरिएको हुन सक्ने उनले बताए।
संसद अवरोधकै कारण अहिलेको गतिरोध भएकाले संसद सुचारू गर्नकै लागि बालुवाटारमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ।